Tuesday May 14, 2019 - 16:06:26 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Jowhar ayaa la hadlayay boqolaal arday ah oo saaka isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee Magaalada Jowhar waxana uu ku amray guddiga qaadista imtixaanka oo ay wasaar
Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Jowhar ayaa la hadlayay boqolaal arday ah oo saaka isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee Magaalada Jowhar waxana uu ku amray guddiga qaadista imtixaanka oo ay wasaarada waxbarashada Dowlada federalka soo dirty in ay dib ugu laabtaan Muqdisho.
Madaxweynaha Waare ayaa sheegay in maamulkiisu uu si gaar ah u sameysanayo imtixaanka dugsiyada sare kadib markii dowlada federalka ay ku dhowaaqday in la baabi’iyay imtixaanka oo dhan.
Waxa uu sheegay Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare in uu dhisi doono gudi qaabilsan Imtixaanka Hirshabeellana ay Masuul ka noqo doonta Imtixaamka ay galayaan arday wax kabarata deegaanada Hirshabeelle.
Howshiinii waad gabteen meeshaad ka timideen ku noqdeen amnigiina iyo joogitaankiina dhibaatuu nagu yahay.”ayuu yiri Madaxweyne Waare.
Sidoo kale Madaxweyne Waare ayaa ugu baaqay Wasaarada Waxbarashada in ay isla xisaabtan sameyso oo si deg-deg ah cidii fashilisay imtixaanka tallaabo loogaga qaado.
Sidoo kale barnaan baxyo kuwaan lamid ah waxa ay maanta ka dheceen Magaalooynka waawayn ee dalka Sida Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho,Kismaayo, Dhuusamareeb iyo degmooyin kale oo ka tirsan Soomaaliya.
Marka laga soo Tago Hirshabeelle Maamulada kale dalka kama hadlin dib u dhaca ku yimid Imtixanaadka dowlada Soomaaliya ay qaadaysay ee 2018/2019 oo wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Bare uu la xalay ku dhawaaqay in dib loogu laabanayo.